मोडल लिला गिरी म्युजिक अवार्डको उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल, अरु को-को परे मनोनयमा ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
मोडल लिला गिरी म्युजिक अवार्डको उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल, अरु को-को परे मनोनयमा ?
प्रकाशित: २०७४ साउन २ गते १६:३१
काठमाडौं २ श्रावण । सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिकले आयोजनामा तेश्रो सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्डको आयोजना गर्ने भएको छ । साप्ताहिकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यहि श्रावण २७ गते हुने अवार्डको उत्कृष्ट पाँच सार्वजनिक गरेको छ ।
अवार्डका लागि सर्वोकृष्ट लोकदोहोरी मोडल केटीमा सर्वोत्कृष्ट मोडलमा रुपा कंडेल, लिला गिरी, रितु तामाङ, रिनाथापा मगर, दिपासा विसी मनोनयमा परेका छन । पछिल्लो समय यि मोडलहरु निकै चर्चामा छन । अन्तमा सर्वोकृष्ट मोडल को बन्ने हो भन्ने चाही श्रावण २७ गते नै कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्वाड वितरण कार्यक्रम धादिङको ओम शान्ति चलचित्र मन्दिरमा आयोजना हुनेछ । अवार्ड २१ विद्या समेटिएको छ । अवार्डको निर्णायकमा पत्रकार तथा गीतकार शान्तिप्रिय, संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ र राष्ट्रिय लोकदोहारी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष तथा सर्जक चन्द्र शर्मा रहेका छन् ।
अवार्डमा समावेश गरिएका विधा र मनोनयमा परेका कलाकारहरु
४, के।के। अधिकारी – झड्का